Kenya oo sheegtay in Al-Shabaab ay dileen labo Muwaadiniinteeda ah | Faafan News
Kenya oo sheegtay in Al-Shabaab ay dileen labo Muwaadiniinteeda ah
Dowladda dalka Kenya ayaa sheegtay in Laba ka mid ah muwaaddiniinteeda ay xoogaga ururka Al-shabaab ku dileen Gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degaanka Kuunya Barow, Maalinkii Isniinta 12-kii Bishan February.
Waxa ay sheegtay Dowladda dalka Kenya raggan la toogtay in Xoogaga Shabaab ay uga shakiyeen in ay u basaasayeen Ciidanka Difaaca Kenya ee loo soo gaabiyo (KDF).
Raggan labada ah ee Shabaabka ay toogteen ayaa waxa ay kala yihiin Xasan Yuusuf iyo Maxamed Xasan, waxayna ka soo jeedaan Gobolka Marsabit, sida uu daabacay Wargeyska Star oo ka soo baxa dalka Kenya.
Sidoo kale Kenya ayaa sheegtay in Shabaab ay dileen in ka badan 20 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Kenya, oo ay ka mid ahaayeen Jared Mokaya, Faraj Abdulmajid, Ahmed Yusuf, Ahmed Nur, Abdi Osoble, Abdullah Talal iyo Hashim Othman, kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay si hoose ula shaqeynayeen Ciidanka Kenya.
Xoogaga ururka Al-Shabaab ayaa inta badan degaanada ay gacanta ku hayaan oo ay maamulaan ku toogta dadka ay ku eedeeyaan in ay la shaqeeyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dalalka kale ee deriska ah.